Tele RELAY တစ်ခု - ပင်မကို keyboard shortcuts တွေကိုအသစ်အ PowerToys နှင့်အတူ Windows ရဲ့ 10 View
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom "ပြရန်အဓိကကီးဘုတ်အသစ်က PowerToys နှင့်အတူ Windows ရဲ့ 10 shortcuts
အသစ်က PowerToys နှင့်အတူအဓိက keyboard shortcuts တွေကို Windows ကို 10 View
မည်သည့်သစ်ကို PowerToys မိုက်ကရိုဆော့ဖနှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် Windows ကို 10 များအတွက် keyboard shortcuts တွေကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေသင်သည်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်မှာသူတို့ကိုမသိရပါဘူးသောအခါ,
Windows ကို 10 မောက်နှင့်အတူထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဆိုပါကပိုမိုမြန်ဆန်အချို့သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင် keyboard shortcuts တွေကိုသုံးစွဲဖို့မကြာခဏအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုအကျိုးရှိစွာလှုပ်ရှားမှုများသည်ဤသော့ချက်ပေါင်းစပ်ကြိုက်လားကြုံတွေ့ကြောင်းအခွင့်အလမ်းအားဖြင့်လည်းမဟုတ်ပါ။
သို့သော်လူတိုင်းမလွှဲမရှောင်သကဲ့သို့, ဂန္နှင့်တစ်လောကလုံး shortcuts တွေကိုသိတယ်လျှင် ပြီးရင် Ctrl + C ကို တစ်ဦးကို item ကူးယူအခြားပေါင်းစပ်သင်မကြာခဏသူတို့ကိုမသုံးကြဘူးသည့်အခါမှတ်မိဖို့ပိုခက်ခဲတယ်။ ဤအကျော်ကြား key ကိုအမြတ်ထုတ်, အထူးသဖြင့် Windows ကိုမှတိကျသောပညတျ၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည် Windows ကို အဆိုပါအဖြစ်ကီးဘုတ် Windows ကို + R ကို သော command ကိုကွပ်မျက် window ကိုဖွင့်လှစ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, မိုက်ကရိုဆော့ဖသည်သူ၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က PowerToys အတွက်သေးငယ်တဲ့သတိပေးမှုတညျဆောကျခဲ့သညျ။
PowerToys: Windows ကိုတိုးတက်စေရန်အခမဲ့ utilities တစ်ဦးစုဆောင်းမှု
Windows ကို 95 နှင့်အတူပေါ်ထွန်း, PowerToys က Windows ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသေးငယ်တဲ့အခမဲ့ utilities ပါဝင်သည်။ အချိန်ကအရမ်းလူကြိုက်များ, သူတို့ကနှစ်ပေါင်းပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ Microsoft ကအထူးကို Windows 10 များအတွက်ဗားရှင်းထမွောကျရှိဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် (ကြည့်ရှု Topic) ..
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်တွင် PowerToys ညံ့ဖျင်းချောနှင့်လုံးဝအင်္ဂလိပ်, မပြည့်စုံ, သာမူကြမ်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့နှစ်ခုသာ module တွေယခုအချိန်တွင်များအတွက် activated နေကြသည်: ပြတင်းပေါက်အဆိုပါ Workspace ကိုပိုကောင်းအောင်အလိုအလြောကျဆိုဒ်ပြောင်းရန်ရာအများအပြားအစိတ်အပိုင်းများသို့မျက်နှာပြင်ပြန်စီဖို့ပထမဦးဆုံးခေါ်, FancyZones, ဒုတိယ Shortcut ကိုလမ်းညွှန်ကို keyboard shortcuts တွေကိုတစ်ဦးလမ်းပြဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကြှနျုပျတို့သညျဤအချက်ကိုစာရွက်စိတ်ဝင်စားသောသူ၏ရန်ဖြစ်ပါသည်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖသည်အခြား module တွေထည့်သွင်းအနာဂတ်အသစ်အ PowerToys ကြွယ်ဝစေခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်စီစဉ်နေသည်။ ညံ့ဖျင်းချောသော်လည်းဒါပေမယ့်နှစ်ခုအဆိုပြုထားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြီးသားအသုံးပြုကြသည်။
Windows ကို 10 အသစ် PowerToys Install
°ထိုအခါ installer ကိုပါဝင်သောဒေါင်းလုပ်ဖိုင်ကိုဖွင့်လှစ်။
အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်း window ကိုဖွင့်လှစ်။ အရာအားလုံးကဒီပထမဦးဆုံးဗားရှင်းအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သတင်းအချက်အလက်များသည် non-အင်္ဂလိပ်စပီကာမှနားလည်နေဆဲဖြစ်သည်။ အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ နောက်တစ်ခု ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်။
လာမယ့်မျက်နှာပြင်တွင်, box ကိုစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံ ငါလိုင်စင် Agrement အတွက်စည်းကမ်းချက်များကိုလက်ခံ ထို့နောက်ကိုနှိပ်ခြင်း နောက်တစ်ခု.
မျက်နှာပြင်တွင် ဦးတည်ရာကို Folder ကိုcheck လုပ်ထားသေတ္တာများနှင့် default အနေနဲ့ဦးတည်ရာကိုရစေ - သို့မဟုတ်သင် installation ကိုစိတ်ကြိုက်ချင်လျှင်ရွေးချယ်စရာကိုပြောင်းလဲရန် - နောက်တဖန်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ နောက်တစ်ခု.
လာမယ့်မျက်နှာပြင်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ Install နှင့်စောင့်ပါ။
ပြတင်းပေါက်ကနေလျှင် အသုံးပြုသူအကောင့်ထိန်းချုပ်ရေး ကလစ်နှိပ် - ဤအမှု၌, PowerToys - application တစ်ခုသင့်ရဲ့ device ကိုမှစသောအပြောင်းအလဲလုပ်လိုကြောင်းအသိပေးပေါ်လာသော ဟုတ်ကဲ့ ကိုလက်မခံခြင်းနှင့်နောက်တဖန်စောင့်ဆိုင်းရန်။
တပ်ဆင်ပြည့်စုံဖြစ်တဲ့အခါ, PowerToys Setup ကိုပြီးစီးသတင်းစကား box ကိုနဲ့အတူပေါ်လာလိမ့်မယ် PowerToys စတင်ရန် စစ်တယ်။ အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အပြီးသတ်.
တစ်ဦးကသတိပေးပြတင်းပေါက်တစ်ခု application ကိုအသိပေးလုပ်ချင်သူများမြင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Accept ဟုတ်ကဲ့။ PowerToys နောက်ဆုံးတော့အလိုအလျှောက်စတင်။
အဆိုပါ PowerToys Set
ဖြန့်ချိခဲ့သော်လည်း, PowerToys ပြသကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါ interface ကို access လုပ်ဖို့, Windows မှာ taskbar အတွက်အောက်ခြေမှအသေးမြှားကိုနှိပ်ပါ။ ပေါ်လာသော mini ကို menu မှာ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အဆိုပါ PowerToys ၏အိုင်ကွန် သငျသညျခကျြခငျြးကိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူးလျှင်စာတန်းပူဖောင်းရန်သင့်အားကူညီပေးနေ။
PowerToys ၏ဝင်းဒိုးကိုသာအထက်တွင်ဖော်ပြထားနှစ်ခု module တွေပေးထားပါတယ်။ လက်ဝဲကော်လံအတွက် Shortcut ကိုလမ်းညွှန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆိုပါလမ်းညွှန်ကို keyboard shortcuts တွေကိုနှစ်ခုသာ parameters များကိုရှိပါတယ်: မီလီစက္ကန်အတွက်လမ်းညွှန် display ကို၎င်း, ပြတင်းပေါက်၏ opacity ကိုနှုန်းများအတွက်လိုအပ်သောအချိန်, ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကို default တန်ဖိုးများကိုလိုအပ်ခဲ့လျှင်သာသူတို့ကိုပြောင်းလဲမှန်ကန်သောဖြစ်ကြသည်။
ဒီ window ထဲမှာလုပ်ဖို့အထူးဘာမျှမသင်ဤပထမဆုံးခရီးစဉ်အပြီးပိတ်ဖို့နိုငျသညျ, ရှိပါသည်။
keyboard shortcuts တွေကိုရန်လမ်းညွှန်ကိုအသုံးပြုပါ
လမ်းညွှန်များအတွက် Windows ကို keyboard shortcuts တွေကို PowerToys ကို Windows အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာ default အနေနဲ့စတင်မဆိုဆော့ဖျဝဲများအတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်မသုံးနိုင်တယ်။ ဒါဟာဖော်ပြရန်ရုံခလုတ်ကိုအပေါ်တစ်ဦးရှည်လျားသောစာနယ်ဇင်းပြုပါ Windows ကို - ဤသည်ယခင်ခြေလှမ်းအတွက်ညွှန်ပြနာမည်ကြီးကာလဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံစူးစိုက်မှုပြုလုပ်အဖြစ်မကြာမီသင် button ကိုလွှတ်ပေးရန်အဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွား!
အဆိုပါလမ်းညွှန်ကဘာမှကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်သတင်းအချက်အလက်များထက်အခြားအဘယ်သူမျှမ function ကိုရှိပါတယ်။
လက်ဝဲဘက်မြှားသော့နှင့်အတူပြတင်းပေါက် manipulate မှအသုံးဝင်သောပညတ်တော်တို့ကိုသတိပေးနေပါတယ်။
ပြန်လည်သိမ်းဆည်း၏ညာဘက် key ကိုပေါင်းစပ်နဲ့ခလုတ်အားပညတ်တော်မူ၏။ အမြဲတမ်းကို Windows key ကိုနှင့် တွဲဖက်. သူတို့ကိုအသုံးချ: အအလယ်တန်းသော့ညွှန်ပြနေကြသည်သာသတိပြုပါ။ ဥပမာ Windows ကို + S ကို ရှာဖွေရေးရန်, Windows ကို + D နဲ့ desktop ပေါ်မှာပြသသို့မဟုတ်ဝှက်ရန်, Windows ကို + E ကို စသည်တို့ကို, ရှိသမျှပြတင်းပေါက် minimize လုပ်ဖို့ဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို, Window + M ဖွင့်လှစ်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရေအတွက်ကသော့၏အတန်းကိုဆင်းနေတဲ့အရေအတွက်က key ကို (ဥပမာနှင့်တိုက်ရိုက် run နိုင်ပါတယ်သော taskbar ထဲတွင်နေရာဆော့ဖ်ဝဲပြသထားတယ်, Windows ကို +3လက်ဝဲဘက်အနေဖြင့်တတိယ software ကိုစတင်နိုင်ရန်) ။
Apple ကအသစ်တခု 10,2 လက်မမော်ဒယ်မိတ်ဆက်နေဖြင့်အိုင်ပက်ဒက၎င်း၏အကွာအဝေးကို update